ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Manything
Manything APK ကို
Manything Monitor တစ်စုံတစ်ရာအတိုကောက် ... နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုအတူလုပျနိုငျအတိအကျဘာကိုပဲ!
ကိုယ့်အနေနဲ့ချက်ချင်းအိမ်ပြန်လုံခြုံရေးကင်မရာသို့လှည့်ရန်သင်၏အားလပ်ချိန်မှာကိရိယာပေါ်တွင် Manything app ကို download လုပ်ပါ - Manything သင်တစ်ဦးအားလပ်ချိန်မှာစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet အသက်တာ၏သစ်တစ်ခုငှားရမ်းပေးပေးနိုင်ပါတယ်။
- လြယ္ကူကို set up
- Adjustments ထောက်လှမ်းဇုန်နှင့်ကင်မရာ sensitivity ကို
- IFTTT စမတ်နေအိမ်ပေါင်းစည်းမှု
- မထည့်သည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုအတိတ်ကဗီဒီယိုဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ခြင်းနှင့် Manything မိုဃ်းတိမ်သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့စီစဉ်ထား
ရိုးရှင်းစွာအသင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ Manything install "ကင်မရာ" mode ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းစံချိန်ကိုရွေးပါ။ ထိုအခါသင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်ထားတဲ့သင့်ရဲ့အဓိကဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက် Manything ကို download လုပ်ပါနှင့် "Viewer ကို" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာယခုသင်ဘယ်နေရာကနေမဆိုသင့်ကင်မရာရိုးရှင်းသောစောင့်ကြည့်နိုင်မယ့်,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အစီအစဉ်တွင်သင်သည် 1 ကင်မရာကိုအပေါ် Manything ကိုသုံးနိုင်သည် - သင်ရွေ့လျားမှု / သံကိုသတိပေးချက်လက်ခံရရှိနှင့်သင့်ကင်မရာကိုတိုက်ရိုက်စီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်! , 1 device ကိုထက်ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သည်အတိတ်ကာလကဗီဒီယိုဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ခြင်းနှင့် Manything မိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုကယ်တင်လိုပါသလား? ရုံ $ 3.99 တစ်လကနေကျနော်တို့ရဲ့လစဉ်ကြေးပေးသွင်းအစီအစဉ်များကိုတ Upgrade ။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါက support@manything.com အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Hikvision ကင်မရာများနှင့်အတူ Manything သုံးပြီးသူတို့အဘို့ကောင်းမွန်သောသတင်း - သင့်ကင်မရာကိုတစ်ဦးပြည်တွင်းရေးမိုက်ခရိုဖုန်းသို့မဟုတ်သင်ယခုစံချိန်သံကိုတတ်နိုင်သမျှတစ်ခု aux input ကိုရှိပါတယ်လျှင်။ ရုံအပြင်အဆင်များ menu ကိုသွားပြီး switch သည်လှန်!
6.6.0 တစ်ဦး (446)
41.75 ကို MB